रेडमी नोट S एस औपचारिक रूपमा भारत मा सुरू गरिएको छ Androidsis
रेडमी नोट S एस: पुरानो परिचितका लागि नयाँ नाम
रेडमी नोट officially आधिकारिक रूपमा यस वर्षको सुरूमा प्रस्तुत गरिएको थियो. यो नयाँ ब्रान्डको रूपमा ब्रान्डको पहिलो फोन हो, एन्ड्रोइडको मध्य-दायरामा यसको प्रवेश बाहेक। एक उपकरण जुन अहिलेसम्म बजारमा धेरै राम्रो यात्रा भएको छ, बिक्री with चार लाख युनिट। अब, रेडमी नोट S एसको सुरुवातको घोषणा भयो।
यो रेडमी नोट S एस हो यो नोट of को एक संस्करण जुन भारतीय बजारको लागि सुरू गरिएको छ। यो सियाओमीको लागि प्रमुख बजार हो, त्यसैले हामी एउटा संस्करण फेला पार्छौं जुन केवल यो बजारमा पुग्छ। यद्यपि यो नयाँ संस्करणले हामीलाई मूलको तुलनामा मुश्किलले परिवर्तनहरू ल्याउँछ।
यी हप्ताहरू यस मोडेलको बारेमा हल्लाहरू छन्। सबैले स that्केत गरे कि यो परिमार्जन गरिएको संस्करण हुनेछ, अधिक शक्तिशाली प्रोसेसरको साथ। यो स्नेपड्रैगन 730 टिप्पणी गरिएको थियो, क्वालकॉमबाट भर्खरको मध्ये एक, यो फोनमा प्रयोग हुने थियो। तर अन्तमा यो त्यस्तो भएको थिएन, जस्तो कि हामीले उसको प्रेजेंटेशनमा देख्यौं।
Xiaomi Redmi नोट7समीक्षा गर्नुहोस्
1 निर्दिष्टीकरण रेडमी नोट S एस
निर्दिष्टीकरण रेडमी नोट S एस
यो रेडमी नोट S एसले हामीलाई विशेष विवरणहरू छोड्दछ जुन हामी यस केसमा राम्ररी जान्दछौं। एक मध्यम-दायरा मोडेल जसले राम्रो प्रदर्शन गर्दछ, फोनको समान डिजाइनको साथ जनवरीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यद्यपि यस अवस्थामा भारतीय बजारमा स्पष्ट तरिकामा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो। फेरि पैसाको लागि ठूलो मूल्य। यी यसको विशिष्टताहरू हुन्:
स्क्रिन: 6,3 इन्च Insel LTPS २ 2340० x १ p० पिक्सल रिजोलुसन र १ .1080।।: Ratio अनुपातको साथ
प्रोसेसर: Snapdragon 660
RAM:3/4जीबी
आन्तरिक भण्डारण: /२/32 GB जीबी (माइक्रोएसडी कार्डको साथ 64१२ जीबीसम्म विस्तार योग्य)
ग्राफिक कार्ड: एड्रेनो 512०
रियर क्यामेरा: + 48 + MP MP LED फ्लैशको साथ
अगाडिको क्यामरा: 13 सांसद
कनेक्टिविटी: ब्लुटुथ .5.0.०, G जी / एलटीई, डुअल सिम, वाइफाइ 4०२.११ डुअल, यूएसबी-सी कनेक्टर
अन्य: अनुहार मान्यता द्वारा अनलक, पछाडि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर
ब्याट्री: 4000W द्रुत चार्जको साथ 18 एमएएच
अपरेटिंग प्रणाली: अनुकूलन तहको रूपमा MIUI १० को साथ एन्ड्रोइड .9.0.० पाई
आयाम: 159.21 x 75.2 x 8.1 मिमी
वजन: १ 186 grams ग्राम
किन यो नयाँ संस्करण भारतीय बजारको लागि जारी गरियो? यो सम्भवतः तपाईलाई धेरैले के सोचिरहेछन्। यो फोन भारतमा यस बर्षको सुरूमा पनि सुरू हुँदै थियो, तर भारतको रेडमी नोट we हामी गर्न सक्दैनौं। स्पेनमा खरीद गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, एशियाई देशमा यस बर्षको सुरूमा सुरू गरिएको फोनको भिन्न रियर क्यामेरा थियो। यसमा MP 48 MP सेन्सरको सट्टामा, एक १२ MP प्रयोग गरिएको थियो। यो फोनमा प्रमुख भिन्नता हो।
अब, यो नयाँ संस्करणमा, जो रेडमी नोट S एस नाममा सुरू गरिएको छ, हामी फेला पार्दछौं फोन जस्तै समान विनिर्देशहरूहामी महिनौं को लागी स्पेन मा किन्न सक्षम छौं। त्यसैले यो सेन्सर केवल परिवर्तन गरिएको छ, एक नयाँ फोन प्रस्तुत गर्न जुन देशमा राम्रो बिक्री गर्न सेट गरिएको छ। यो ब्रान्डमा एक सामान्य अभ्यास हो, त्यसैले केही अंशमा यो त्यस्तो कुरा होइन जुन हामीलाई धेरै नै छक्क पार्दछ।
हामीले पहिले नै छलफल गरिसकेका छौं, फोनको यो संस्करण भारतमा मात्र सुरु हुन लागेको छ। किनभने अन्य बजारहरूमा, जस्तै स्पेन, हामी पहिले नै यसलाई आधिकारिक रूपमा महिनौं किन्न सक्छौं। भारतमा यसको प्रक्षेपण अब आधिकारिक छ। त्यसैले देश मा ती Redmi नोट 7S को खोज मा उपभोक्ताहरु पहिले नै आधिकारिक रूपमा किन्न सक्छन्।
अपेक्षित रूपमा, फोन नोट7भन्दा केही महँगो छ जुन भारतमा सुरु गरिएको थियो बर्षको शुरुमा। हामी यसको र्याम र आन्तरिक भण्डारणको आधारमा उपकरणको दुई संस्करणहरू फेला पार्दछौं। ती मध्ये पहिलो 3/32२ जीबीको साथ १०,10.999 141 Indian भारतीय रुपैयाँको मूल्य संग सुरू भयो जुन विनिमय दरमा करिब १ about१ यूरो हो। अर्कोतर्फ, रेडमी नोट S एसको दोस्रो संस्करण 7/3 GB जीबीको साथ १२,64 12.999 rupees रूपैयाँ हो जुन विनिमय दरमा करिब १ 167 यूरो हो।
सबै कुरा स indicates्केत गर्दछ भारतमा फोन हिट हुने छ। त्यसकारण हामी देख्नेछौं कि कसरी बिक्री बढ्ने छ, अहिले सम्म बेचिएको चार लाख भन्दा पर।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » रेडमी नोट S एस: पुरानो परिचितका लागि नयाँ नाम
Vivo ले ब्रान्डको पहिलो गेमि smartphone स्मार्टफोन सीमित संस्करण स्पेस नाइट iQOO सुरूवात गर्‍यो
के गुगलले सियामी वा वनप्लस जस्ता चिनियाँ ब्रान्डहरू रोक्न सक्छ?